सानैदेखि नक्कल–झक्कल गर्ने बानी थियो– प्रियङ्का | Ratopati
सानैदेखि नक्कल–झक्कल गर्ने बानी थियो– प्रियङ्का
personकुवेर गिरी exploreकाठमाडौं access_timeपुस २७, २०७५ chat_bubble_outline0
प्रियङ्का सिंह फिल्म ‘गरुड पुराण’की नायिका हुन् । अभिनेता गौरव पहाडीसँग ‘अन्जानैमा’ बोलको गीतको भिडियो अभिनय गरेर यो क्षेत्रमा होमिएकी उनको ‘गरुड पुराण’ डेब्यु फिल्म हो ।
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँकी प्रियङ्का टिक टक (म्युजिकल्ली)मा भने निकै हिट छिन् । सैयौँ बढी टिक टक भिडियोमा उनले अभिनय देख्न सकिन्छ ।
‘टिक टक त एक्लै बसेर बनाउँदा भन्दा फिल्ममा धेरैको अगाडि अभिनय गर्न निकै गाह्रो हुँदो रहेछ’, उनले भनिन् । ‘गरुड पुराण’मा उनी कर्मा, प्रवीण खतिवडा र कामेश्वर चौरसिया तीन हिरोका एक्ली हिरोइन हुन् । फिल्ममा सबैले उनलाई मन पराउँछन् । तीन हिरोकी हिरोइन बन्दा रमाइलो महशुस भएको उनले बताइन् ।
स्वभावले कम बोल्न र आफैमा रमाउने व्यक्ति उनी फिल्ममा धेरै बोल्ने र निडर भूमिकामा छिन् । सानैदेखि ऐना हेरेर नक्कल झक्कल गर्ने बानी भएकी प्रियङ्कासँग रातापाटीको दश प्रश्न ।
डेब्यु फिल्म प्रदर्शनमा आउँदैछ हैन ?
– हो, यही कारणले एकदमै एक्साइटेट छु र नर्भस पनि । डर पनि लागि रहेको छ । पहिलो चलचित्र अभिनय कस्तो भयो होला । दर्शकलाई मन पर्छ पर्दैन । दर्शकले के भन्ने हुन् । मनमा धेरै कुरा खेलिरहको छ ।
आफूलाई नायिकाका रूपमा उभ्याउँदा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ ?
– हिरोइन बन्छु भन्ने मेरो मनमा कहिल्यै थिएन । तर म सानैदेखि ऐना हेरेर नक्कल झक्कल भने गर्थे । यो मेरो लाइफको युट्रन पनि हो । न हिरोइन हुँ भनेर आफैलाई खासै फिल भएको छैन । परिवार, आफन्त र साथीभाइले हिरोइनभन्दा अनौठो फिल लाग्दो रहेछ ।
फिट्नेस त गर्नुहुन्छ ?
– केही समय भयो । खासै ध्यान दिन सकेकी छैन । केही अगाडिसम्म जुम्बा जान्थे । योगा गर्थे ।
फेसनतिर रुचि ?
–धेरै छ । जानकार राख्न पनि मनपर्छ । मलाई क्याजुअल पहिरन नै बढी सुहाउँछु । कुर्था सुरुवालमा पनि राम्री देखिन्छु ।
–नम्बर वान हिरोइन बन्ने सपना छ । त्यही पूरा गर्ने दौडमा लागिसके ।
फुसर्दको समय ?
– किताब पढ्न मनपर्छ ।
– म सारै फुडी छु । धेरैथरीका परिकार खान मनपर्छ । तर धेरै खान सक्दिन । थोरै थोरै मात्र ।
छैन, छैन । अफरत आइरहेको हुन्छ । प्रेमका लागि म अहिले रेडी छैन ।
केरिङ, इन्टेलिजेन्ट र गुडलुकिङ भएको केटा मनपर्छ ।
स्क्रिन सेयर गर्न मन लागेको कलाकार ?
– आकाश श्रेष्ठ र प्रदीप खड्का । यी दुवै हिरो निकै मनपर्छ ।
उर्वनको नयाँ गीत ‘साथी’